‘अधिकृत र सहलेखापाल सरुवा भएको ५ महिना भयो, तर साँचो पनि दिएका छैन’
प्रमुख, नवराजपुर गाउँपालिका (सिरहा)
गाउँपालिकाको अवस्था के छ ?
– विगतको भन्दा राम्रो छ । तत्कालिन अधिकृत र सहलेखापाल कार्यालयलाई लथालिङ पारेर सरुवा भई जानुभयो । अहिले केहिदिन अगाडी मात्र प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र नायब सुब्बा आउनुभएको छ । उहाँहरु विगतको भन्दा पारदर्शी रुपमा काम गर्नुहुन्छ । बोर्ड मेम्बरहरुसँग बुँदागत रुपमा छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्नुहुन्छ ।
विकास निर्माणको काम कसरी अगाडी बढ्दैछ ?
– तत्कालिन प्रशासकिय अधिकृत र सहलेखापालका कारण एकदमै समस्या भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तत्कालित प्रशासकीय अधिकृत ललन यादब र सहलेखापाल अशोक यादब कहिल्यै कार्यालयको समयमा आउनु भएन । महिनामा मात्र १० दिन आउनुहुन्थ्यो । अधिकृत आएको दिन सहलेखापाल नआउने र लेखापाल आएको दिन सहलेखापाल नआउने गर्नुहुन्थ्यो । जसले गर्दा एकदमै गाहे भयो । सबै थोक अन्यौल पारेर सरुवा हुनुभयो । सरुवा भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म दराजको साँचोसम्म हस्तान्तरण गर्नुभएको छैन ।
त्यही कारण विकास निर्माण प्रभावित बन्यो त ?
– चलाएको गाउँपालिकाको बजेट अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । कागजात पनि बरबुजारथ नगरेको अवस्था छ । बरबुजारथ नगर्नुका साथै रमाना समेत नलिइ सरुवा भएर अन्य गाउँपालिकामा कसरी हाजिर हुनुभयो आश्चर्य लागेको छ । साउनदेखि अफिस आएको छैन । पटक पटक ताकेदा गर्दा समय दिनुहुन्छ । तर समय दिने काम मात्र गर्नुभयो, अहिलेसम्म आउनुभएको छैन । कोलेनिका प्रमुख ज्युले पहिले पनि उहाँहरुलाई भन्नुभएको थियो कि सरुवा भएर जानुअगाडी हरहिसाव सार्वजनिक गर्न । तर सबैको कुरा नमानी कानुनलाई लत्याएर यहाँबाट सरुवा हुनुभयो ।
हरहिसाव सार्वजनिक नगरी अधिकृत र सहलेखापाल सरुवा भएपछि कति गाहे भइरहेछ ?
– उहाँहरुको कारणले गाउँपरिषद् गर्न ढिलो भयो । असारमै हुनुपर्ने परिषद बल्ल जसोतसो पुस २४ गते गर्यौं । हरहिसाव नदिँदा र कागजात समेत ढराजमा बन्द गरी साँचो बोकेरै गएका कारण बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा परिषद गर्नुपर्यो ।
– अब कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं । गत आर्थिक वर्षको आय–व्याय सार्वजनिक गर्न प्रशासकीय अधिकृत र सहलेखापाललाई औपचारिक पत्र पनि पठाएका छौं । यदि अझै वास्ता नगरे दोस्रो पत्र पठाउँछौं । तरपनि आएन भने तेस्रो पत्र पठाउँछौं । झै बरबुजारथ गर्न तयार नभए कानुन बमोजिम अगाडी बढ्ने सोच छ ।
यो आर्थिक वर्षको काम सुरु भयो की ?
– चालु आर्थिक वर्षको परिषद् भर्खर गरेका कारण १० दिनपछिबाट विकास निर्माणको काम सुरु हुन्छ । नवराजपुरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ढलान कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले गाउँपालिकाको कार्यालय नै छैन । कार्यालयका लागि अढाई विघा जग्गामा बाउन्ड्री र माटो पुर्ने काम गर्छौ । अगामी आर्थिक वर्षमा भवन निर्माण गर्ने योजना छ । विगतमा जेसिबी, दुई टिपर र दुई वटा ट्याक्टर खरिद गरेका थियौं । यस आर्थिक वर्षमा ग्रेडर, रोलर र सेफ्टी ट्यांक खरिद गछौं । यति भएपछि विकास निर्माणको काम तिब्र गतिमा हुने विश्वास छ । साथै सोलार सडक वत्ति पनि पाँचै वडामा जडान गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं ।
तत्कालित अधिकृत र सहलेखापालले विभिन्न समान खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको चर्चा चलेको छ ।
के हो यर्थात ?
– अहिलेसम्म हरहिसाव दिएको छैन । अधिकृत र सहलेखापालले सिस्टम अनुसार काम नगरी मनोमानी गर्नुभएको यर्थात हो । बजेट खर्च गर्दा गाउँपालिका प्रमुखसँग तोक लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकृत र सहलेखापालले मसँग कहिल्यै तोक नै नलगाई आफुखुसी बजेट खर्च गर्नुभएको छ । धेरै समान खरिद गर्दा मलाई जानकारी सम्म गराएको छैन । टेबुल, कुर्सी र दराज खरिद गर्दा पनि कमिशन उहाँहरु खनुभएको छ । भोलीको दिनमा बरबुजारथ गर्दा सबै कुरा छर्लङ हुन्छ ।
तत्कालिन अधिकृत ललन यादब र सहलेखापाल अशोक यादब सरुवा भएको ५ महिना वितिसक्दा पनि बरबुजारथ गर्नुभएको छैन । उहाँहरु टेबुल, कुर्सी र दराज खरिद गर्दा पनि कमिशन खानुभएको छ । बरबुजारथ गरेपछि सबै छर्लङ हुन्छ ।